Indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo yonke sinombuki zindwendwe onguMarie-Paule
Relax kule ndawo ezolileyo neshushu.
Jabulela indalo engqongileyo. Ukuhamba, ukhenketho lwebhayisekile, iindlela ezongezelelweyo ziyafikeleleka kwi-gîte.
Wena kufutshane nedolophu Spa elinomtsalane ka Spa, idweliswe njenge UNESCO site ilifa ihlabathi i "iidolophu Spa enkulu yaseYurophu", indawo km ezimbalwa ukusuka wesekethe Spa Francorchamps, iindawo zenkcubeko, imbali neyonwabisayo ukufumanisa efana, phakathi kwezinye izinto, le idolophu yaseStavelot kunye neMalmedy.
ILa Taissonnière yigîte encinci yasemaphandleni kubahambi aba-2 - 3.
Ufikelela kuyo ngesango elizimeleyo kwaye uxhamle kwindawo yokupaka iimoto ezinikezelweyo.
Ifakwe kwindawo ephezulu, ikunika indawo elungiselelwe kakuhle yokutyela, ejongene negadi yabucala ebanzi apho unezitulo zomgangatho, itafile kunye nezitulo. I-BBQ kunye ne-brazier zisesandleni sakho.
Ngaphantsi kwe-terrace, indawo evaliweyo inikezelwa ukulungiselela iibhayisikili zakho okanye ezinye izixhobo. Ukhuseleko luyafumaneka.
Ukuba imvula ifuna ukudibana nawe, uya kuba nethuba lokubuyela kwimeko yombulelo kwikhabhinethi ye-infrared kunye nobuhle bayo obuninzi.
ILa taissonnière ikwimitha engama-300 ukusuka kumbindi welali yaseSart lez Spa enezinto eziluncedo. Imiphezulu emibini emikhulu yakhiwe kufutshane.
Le ndlu encinci, i-laTaissonnière iya kukunika indawo epholileyo kwiintsuku ezimbalwa zokuphumla. Ithwele igama layo kakuhle. Ndithatha ithuba lemigca yayo ukwenza intloko enkulu kubo bonke abathandi beebheji!
Ifriji yeAvec partie congélateur
Indawo ezolileyo yi-300 m ukusuka kumbindi welali.
Umbuki zindwendwe ngu- Marie-Paule
Ndihlala kufutshane kwaye ndifumaneka ngokupheleleyo kulo naluphi na ulwazi.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Jalhay